विदेशबाट एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउन नमिल्ने, अब के हुन्छ ?
रेमिट्यान्स कम्पनीले अब एक लाखसम्म मात्र नगदमा भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स १ लाख रुपैयाँसम्म भए नगदमा र त्यसभन्दा बढी बैक खातामार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले जति भए पनि नगदमै भुक्तानी गर्दै आएका थिए ।
टुँडिखेल आसपासमा सार्वजनिक सवारी...
अपाङ्ग विशेष व्यक्ति सम्मान तथा सहायक...
सचेत बनौं ! ८ घण्टा भन्दा बढि र ६ घण्टा...
वाह ! अब पुरुषका लागि पनि गर्भनिरोधक...
होशियार ! राजधानीमा चोरको बिगबिगी:...
काङ्ग्रेस महासमिति बैठक शुरु, विधान...
नुवाकोट घ्याङफेदी मिनीट्रक दुर्घटना...
Heart touching Story ३० वर्षदेखि तुइन तान्दातान्दै...